ကူးစက်တတ်သည့် ရောဂါများ. ကူးစက်ရောဂါ ဆိုသည်မှာ ရောဂါဝေဒနာရှင
ⓘ ကူးစက်တတ်သည့် ရောဂါများ. ကူးစက်ရောဂါ ဆိုသည်မှာ ရောဂါဝေဒနာရှင် တစ်ဦးထံမှ ရောဂါပိုးများသည် အခြားသူ တစ်ဦး၏ ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ လေ၊ ရေ၊ အစားအစာ၊ ပိုးမွှားတိရစ္ဆာန် တို ..